Weerar ka dhacay Muqdisho iyo khasaaro ka dhashay - Awdinle Online
Weerar ka dhacay Muqdisho iyo khasaaro ka dhashay
Dagaalka oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxaa uu ka dhacay Ex-koontorool Balcad ee Magaalada Muqdisho, waxaana uu dhex-maray Ciidamada Booliska Gaarka ah ee Haramcad iyo Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii Xubno ka tirsan Al-Shabaab sida la sheegay ay weerareen Ciidamada Haramcad ee ilaalada dhismaha wadada xiriirisa muqdisho iyo Jowhar, kuwaas oo ku sugan Ex-koontorool Balcad.
Dadka ku nool agagaarka Xaafada Ex-koontorool Balcad ee Magaalada muqdisho ayaa waxaa ay sheegeen in muddo ku dhow 30 daqiiqo ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, isla markaana uu jiro khasaaro dhaawac ah oo ka dhashay.
Qoraal kooban oo kasoo baxay Taliska Ciidamada Gaarka ah ee Haramcad ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka hortageen weerarka kaga yimid dhinaca Ururka Al-Shabaab, isla markaana khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa waxaa loo xilsaaray dhismaha wadada xiriirisa Miqdisho iyo Jowhar, waxaana ay horay uga soo Shaqeeyeen amniga wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye, iyaga oo la kulmay weeraro kala duwan.
Previous articleDowladda Soomaliya oo cambaareysay howlgallada Kenya ee dhanka Cirka ah
Next articleNatiijada doorashada mid kamid ah degmooyinka aad ka loo sugayay ee Somaliland oo lagu dhawaaqay